प्रहरी चौकी कब्जा गर्ने विप्लब समुहको प्रयास असफल ! हेलिकोप्टरबाट थप सुरक्षाकर्मी पठाइयो….. – नेपाली सूर्य
June 3, 2019 Nepali SuryaLeaveaComment on प्रहरी चौकी कब्जा गर्ने विप्लब समुहको प्रयास असफल ! हेलिकोप्टरबाट थप सुरक्षाकर्मी पठाइयो…..
सोलुखुम्बु , २० जेठ । सोलुखुम्बुको एक प्रहरी चौकी कब्जा गर्ने विप्लब माओबादीको प्रयास असफल भएको छ । गएराति महाकुलुङ गाउँपालिका ३ छेस्काममा रहेको प्रहरी चौकी कब्जा गर्ने प्रयास असफल भएको हो । मध्यराति १२ बजेको समयमा २५–३० जनाको विप्लब माओबादीका कार्यकर्ता चौकी पुगेको भएपनि त्यसअघि नै प्रहरी हतियार सहित बाहिरी सकेकाले कब्जाको रणनीति असफल भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
माओबादी कार्यकर्ता कब्जाको लागि आउदै गरेको सूचना पाएपछि चौकीमा कार्यरत ७ जना प्रहरी सहित हतियार सहित सुरक्षित स्थानमा गएका थिए । प्रहरी र माओबादी कार्यकर्ताबीच भेट नभएको भएपनि मध्यान्न १२ बजे देखि विप्लव कार्यकर्ता विहान ३ बजेसम्म चौकी क्षेत्रमै रहेको बताईएको छ । महाकुलुङ क्षेत्रमा केहि दिन देखि विद्युतका कारण नेपाल टेलिकमद्धारा वितरित सञ्चार सेवा अबरुद्ध भएको मौका छोपेर कब्जाको प्रयास गरिएको अनुमान गरिएको छ।
गस्ती बढेको छः गाउँपालिका अध्यक्ष – महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सागर किरातीले पछिल्लो समय गाउँपालिकाको केही वडामा विप्लव समूहको गतिविधि बढेको पुष्टि गरे । उनले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘खोला पारिपट्टि रहेको वडा नं. ५ को नुर्कुममा विप्लव कार्यकर्ताको आउजाउ भइरहेको सूचना थियो । प्रहरीले गस्ती पनि बढाएको थियो ।’ गएराति भएको घटनाबारे भने अहिलेसम्म यर्थाथ विवरण आइ नसकेको उनले बताए । यद्यपि, उनले गाउँपालिकामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले गस्ती बढाएको भने स्वीकारे ।
हेलिकोप्टरबाट थप सुरक्षाकर्मी पठाइयो – चौकी छाडेर प्रहरी भागेको सोलुखुम्बुको महाकुलुङमा थप सुरक्षाकर्मी पठाइएको छ । काठमाडौं र विराटनगरबाट हेलिकोप्टरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पठाइएको हो । आइतबार राति विप्लव समूहका कार्यकर्ताको आक्रमणको डरमा महाकुलुङमा प्रहरीहरु चौकी छाडेर भागेका थिए ।
नेपाली सेनाको जंगी अड्डा स्रोतका अनुसार घटनापछि हेलिकोप्टरमार्फत प्रहरी र सशस्त्रको थप मद्दत टोली सोलुखुम्बु पठाइएको हो । सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर करिब ५० जना सुरक्षा अधिकारीलाई महाकुलुङ गाउँपालिका पठाइएको हो । सैनिक स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘काठमाडौं र विराटनगरबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको विपदको टोली पठाइसकिएको छ ।’
बिरामी भई उपचार गर्ने नेपालगन्ज हिडेकी महिलाको बसमै नि,धन
२३ हजार वर्ष पुरानो मानव जातिको पदचाप भेटियो